Royole က 7.8" အရွယ်အစားရှိ ပထမဦးဆုံး Foldable Smartphone ကို ကြေညာလိုက်ပြီ
Royole က 7.8″ အရွယ်အစားရှိ ပထမဦးဆုံး Foldable Smartphone ကို ကြေညာလိုက်ပြီ
1 Nov 2018 . 11:32 AM
အမေရိကန်နိုင်ငံ ကယ်လဖိုးနီးယားအခြေစိုက် နည်းပညာကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ Royole က ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး Foldable Smartphone ကို ကြေညာလိုက်ပါပြီ။ Royole အကြောင်း လူသိနည်းသေးတယ်ဆိုပေမယ့် ဖုန်း Specification နဲ့ အသွင်အပြင်က အထင်ကြီးစရာပါ။
With Foldable AMOLED DIsplay
7.8″ အရွယ်စားရှိတဲ့ AMOLED Screen ကို ထက်ဝက်ခေါက်ချိုးထားနိုင်မယ်၊ ဖြန့်လိုက်တဲ့ အနေထားဆိုရင်တော့ 1920×1440 Resolution နဲ့အလုပ်လုပ်မယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒီလိုခေါက်ချိုးအသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက် Foldable Hinge က အကြိမ်ရေ ၂ သိန်းထက်မနည်း ကွေးညွတ်ခံနိုင်မယ်၊ Weight အနေနဲ့ 320g အထိ အလေးချိန်ရှိမယ်ဆိုထားလို့ တခြား Smartphone တွေထက် သိသိသာသာပိုလေးနေမှာပါ။
Specification အနေနဲ့ 8-series Snapdragon SoC အသုံးပြုထားဖွယ်ရှိပြီး SD 855 ဒါမှမဟုတ် 8150 ဖြစ်နိုင်ပါတယ်၊ GPU ကိုလည်း Adreno အမျိုးစား 640 မော်ဒယ်နဲ့တွဲဖက်ထားနိုင်ပြီး 6GB RAM ၊ 128GB Storage တို့ Onboard အနေနဲ့ပါဝင်လာမှာပါ။
It can be folded up toapocket size
ကင်မရာပိုင်းမှာဆိုရင်16MP နဲ့ 20MP ၂ လုံးကို Dual Setup သုံးပေးထားမှာဖြစ်ပြီး 3,800 mAh Battery ပါဝင်လာမယ်ဆိုထားပါတယ်။ OS ပိုင်းမှာ နောက်ဆုံးထွက် Android Pie နဲ့မောင်းနှင်မှာဖြစ်ပြီး ကိုယ်ပိုင် Water OS နဲ့ တွဲဖက်ထားမှာပါ။ ဒီအခြေနေတိုင်းသာဆိုရင်တော့ Samsung ၊ LG တို့ထက် Royole က ခြေတစ်လှမ်းပိုသာနေပြီလား?
Rolyole’s Foldable Smartphone “Flexpai”
ဒီကနေ့ နိုဝင်ဘာ ၁ ရက်နေ့မှာ Flexpai Smartphone ကိုတရားဝင်မိတ်ဆက်ထားပြီး လာမယ့် ဒီဇင်ဘာလထဲ Foldable Phone ကို $1,290 နဲ့ ရောင်းချသွားတော့မှာပါ။ ဒီလိုတိုင်းသာဆိုရင် ခေါက်ချိုးဖုန်းထုတ်ဖို့ ရေရေလည်လည်ပြင်ဆင်နေတဲ့ Samsung လို ဒိတ်ဒိတ်ကြဲကုမ္ပဏီကို ဆွံအသွားအောင် Royole လုပ်ပစ်လိုက်ပြီလား? ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် Foldable Smartphone ကို ၂၀၁၈ မကုန်ခင်မြင်တွေ့ရဖွယ်ရှိနေပြီး User Experience နဲ့ပတ်သက်လို့ ဘယ်လိုပြောဆိုကြဦးမလဲဆိုတာကိုတော့ နားစွင့်ထားရဦးမှာပါ။
Royole က 7.8″ အရှယျအစားရှိ ပထမဦးဆုံး Foldable Smartphone ကို ကွညောလိုကျပွီ
အမရေိကနျနိုငျငံ ကယျလဖိုးနီးယားအခွစေိုကျ နညျးပညာကုမ်ပဏီဖွဈတဲ့ Royole က ကမ်ဘာ့ပထမဆုံး Foldable Smartphone ကို ကွညောလိုကျပါပွီ။ Royole အကွောငျး လူသိနညျးသေးတယျဆိုပမေယျ့ ဖုနျး Specification နဲ့ အသှငျအပွငျက အထငျကွီးစရာပါ။
7.8″ အရှယျစားရှိတဲ့ AMOLED Screen ကို ထကျဝကျခေါကျခြိုးထားနိုငျမယျ၊ ဖွနျ့လိုကျတဲ့ အနထေားဆိုရငျတော့ 1920×1440 Resolution နဲ့အလုပျလုပျမယျလို့ သိရပါတယျ။ ဒီလိုခေါကျခြိုးအသုံးပွုနိုငျဖို့အတှကျ Foldable Hinge က အကွိမျရေ ၂ သိနျးထကျမနညျး ကှေးညှတျခံနိုငျမယျ၊ Weight အနနေဲ့ 320g အထိ အလေးခြိနျရှိမယျဆိုထားလို့ တခွား Smartphone တှထေကျ သိသိသာသာပိုလေးနမှောပါ။
Specification အနနေဲ့ 8-series Snapdragon SoC အသုံးပွုထားဖှယျရှိပွီး SD 855 ဒါမှမဟုတျ 8150 ဖွဈနိုငျပါတယျ၊ GPU ကိုလညျး Adreno အမြိုးစား 640 မျောဒယျနဲ့တှဲဖကျထားနိုငျပွီး 6GB RAM ၊ 128GB Storage တို့ Onboard အနနေဲ့ပါဝငျလာမှာပါ။
ကငျမရာပိုငျးမှာဆိုရငျ16MP နဲ့ 20MP ၂ လုံးကို Dual Setup သုံးပေးထားမှာဖွဈပွီး 3,800 mAh Battery ပါဝငျလာမယျဆိုထားပါတယျ။ OS ပိုငျးမှာ နောကျဆုံးထှကျ Android Pie နဲ့မောငျးနှငျမှာဖွဈပွီး ကိုယျပိုငျ Water OS နဲ့ တှဲဖကျထားမှာပါ။ ဒီအခွနေတေိုငျးသာဆိုရငျတော့ Samsung ၊ LG တို့ထကျ Royole က ခွတေဈလှမျးပိုသာနပွေီလား?
ဒီကနေ့ နိုဝငျဘာ ၁ ရကျနမှေ့ာ Flexpai Smartphone ကိုတရားဝငျမိတျဆကျထားပွီး လာမယျ့ ဒီဇငျဘာလထဲ Foldable Phone ကို $1,290 နဲ့ ရောငျးခသြှားတော့မှာပါ။ ဒီလိုတိုငျးသာဆိုရငျ ခေါကျခြိုးဖုနျးထုတျဖို့ ရရေလေညျလညျပွငျဆငျနတေဲ့ Samsung လို ဒိတျဒိတျကွဲကုမ်ပဏီကို ဆှံအသှားအောငျ Royole လုပျပဈလိုကျပွီလား? ဘယျလိုပဲဖွဈဖွဈ Foldable Smartphone ကို ၂၀၁၈ မကုနျခငျမွငျတှရေ့ဖှယျရှိနပွေီး User Experience နဲ့ပတျသကျလို့ ဘယျလိုပွောဆိုကွဦးမလဲဆိုတာကိုတော့ နားစှငျ့ထားရဦးမှာပါ။